Yurub Archives - Sawirrotv
Tag Archive for: 'Yurub'
Madaxweynaha Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta waraaqaha Aqoonsiga ka guddoomay Danjiraha cusub ee dalka Isbeyn u qaabilsan Soomaaliya Mudane Javier Garcia De Viedma. Madaxwaynaha iyo Safiirka oo ay weheliyaan Wasiir Ku Xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Diblumaasiyiin ka tirsan labada dal ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dhinac iyo Arrimaha …
Wiilkii Weeraraka ka Gaystay Dalka Belgium-ka oo Soomaali Noqday (VIDEO)
Wiilkii weeraraka ka gaystay dalka Belgium-ka ayaa la soo sheegayaa inuu yahay Soomaali Qaxootinimo ku soo galay dalka Belgium-ka. Hadaba kooxda xagjiriinta ah ee Daacish ayaa maanta oo Axad ah sheegatay weerarkii wiilka Soomaaliga ah uu ka gaystay magaalada Brussels ee caasimada dalka Belguim-ka. Wiilka Weerarkan geystay ayaa la sheegay inuu yahay nin Soomaali ah …
Ciidamo Cusub oo ka Socda Dalka Talyaaniga oo soo Gaaray Deegaanada Puntland (SAWIRRO)
Dalka Talyaaniga ayaa waxa uu ciidamo gaar ah u soo diray dalka Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Puntland, ciidamadani oo wata Maraakiibta dagaalka iyo Diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Helicopterka ayaa soo gaaray xeebaha xeebaha maamulkaasi. Ciidamada ayaa ka mid noqon doona kuwa la dagaalama kooxaha Burcad Baddeeda Soomaalida, waxaana xeebaha maamuladda Puntland & Galmudug ku …
Dhalinyaro Soomaali ah & Ajaanib kale oo Maanta Laga soo Badbaadiyay Badda Dalka Talyaaniga (SAWIRRO)
Markab ay leeyihiin Ciidamada ilaalinta xeebaha ee dalka Talyaaniga ayaa maanta soo badbaadiyay tahriibayaal isugu jira Soomaali iyo Afrikaan kale oo tiradoodu lagu qiyaasay boqolaal. Maraakiibta badda ee dalka Talyaaniga ayaa gurmad ballaaran u fidiyay tahriibayaashan kaddib markii doonti ay la socdeen ay kula qalibantay xeebaha Jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga. Qaar ka mid ah …
Booqashadii Wasiir Khayre uu ku Tegay Dusha Markabka Midowga Yurub (VIDEO)
Booqashadii Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre uu ku tegay markabka ciidamada Midowga Yurub ee taagan badda Soomaaliya ayaa kulan saacado qaatay kula yeeshay, danjiraha midowga Yurub ee Soomaaliya, taliyaha howlgalka ATLANTA ee la dagaalanka burcad badeeda Soomaaliya, markab dagaal oo ay leedahay dowladda Spain isla markaana qeyb ka ah howlgalka ATLANTA, ayaa diiradda lagu saaray …
Dalka Faransiiska oo Doortay Madaxweyne Cusub (VIDEO)
Doorashadii xilka madaxweynenimada ee xalay ka dhacday dalka Faransiiska ayaa waxaa ku guulaystay Emmanuel Macron, kaasi oo helay ku dhawaad 65.5% codadkii la dhiibtay, halka haweeneydii la tartamaysay ee cunsuriyadda ah Marine Le Pen ay heshay ku dhawaad 34.5%. Emmanuel Macron ayaa ah 39 jir aan horay loogu dooran wax xil ah, waxa uuna noqonayaa …
Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre oo Muqdisho Kula Kulmay Wasiirka Arimaha Dibadda ee Dalka Jarmalka (VIDEO)
Ra’iisal Wasaaraha dalka Soomaaliya mudane, Xasan Cali Khayre ayaa maanta Magaalada Muqdisho ku qaabilay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dalka Germany, Mr.Sigmar Gabriel. Sigmar Gabriel ayaa waxaa garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay wasiirka arimaha dibadda ee dalka Soomaaliya mudane Yusuf Garaad. Soo dhawaynta kadib ayaa waxaa wasiir Gabriel loo geeyay Ra’iisul wasaare …
Booliska Dalka Sweden oo soo Bandhigay Nin lagu Tuhmago Inuu ka Danbeeyay Weerarkii Magaalada Stockholm (VIDEO)
April 08, 2017 – Booliska dalka Sweden ayaa soo bandhigay sawirka ninka lagu tuhmayo inuu ka danbeeyay weerarkii lagu qaaday Magaalada Stockholm. Wararkii u dambeeyay ee ka imaanaya magaalada Stockholm ayaa sheegaya in gabi ahaanba la adkeeyay amaanka xarumaha Dowladda goobaha ay maraan Tareemada iyo xarumaha mashquulka badan. Ciidamada aad u hubeeysan ayaa lagu soo daadiyay …
Kala Orod Maanta ka Dhacay Garoonka Diyaaradaha Orly ee Dalka Faransiiska (VIDEO)
March 18, 2017 – Waxaa saakay abaarihii 8:30 subaxnimo, garoonka diyaaradaha ORLY oo ku yaalla magaalada Paris ee dalka Faransiiska lagu dhex toogtay nin aan la’ogayn cida uu yahay, ninka la toogtay ayaa la sheegayaa inuu mid kamid ah askarta ammaanka sugta ka dafay bistoolad kaddibna ku dhex carary suuq ku yaala garoonka gudihiisa. Booliska …
Madaxweyne Farmaajo oo Maanta Xarunta Madaxtooyada ku Qaabilay Danjire Jutta Frasch (SAWIRRO)
March 08, 2017 – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane, Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo), ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dalka Jarmalka u qaabilsan Soomaaliya iyo Kenya, MRS. Jutta Frasch Madaxweynaha ayaa Amb. Jutta Frasch kala hadlay sidii dib loogu soo nooleyn lahaa xiriirkii taariikhiga ahaa ee labada dal. Madaxweynaha ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya …